စံပြုရုရှားဘာသာစကားပုံစံကို ယေဘူယျအားဖြင့် ခေတ်သစ်ရုရှားစာပေအရေးအသား (современный русский литературный язык) ဟုခေါ်ဆိုကြသည်။ ၁၈ရာစုအစပိုင်း၌ ဘုရင်မဟာပီတာ၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် ရုရှားစာပေကို ခေတ်မီအောင်ပြုလုပ်စေခြင်းဖြင့် ရုရှားခေတ်သစ်စာပေသည် ပေါ်ထွန်းလာပြီး ယခင်ခေတ်ဟောင်းစာပေပုံစံတို့မှ တိုးတက်လာခဲ့သည်။ မစ်ဟေး လိုမိုနိုဆိုဗ်သည် ၁၇၅၅ခုနှစ်တွင် စံပြုသဒ္ဒါကျမ်းကို ပထမဆုံး စာတမ်းပြုစုခဲ့ပြီး ရုရှားအကယ်ဒမီကျောင်း၏ ပထမဆုံး အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုကျမ်းဖြစ်သည့် ရုရှားအဘိဓာန်ကို ၁၇၈၃ခုနှစ်တွင် ထုတ်ခဲ့သည်။ ၁၈ရာစုနှစ်အဆုံးပိုင်းနှင့် ၁၉ရာစုနှစ်များသည် ရုရှားဘာသာစကား၏ "ရွှေခေတ်"ဟု အသိများကြပြီး ထိုကာလများတွင် ရုရှားဘာသာ၏ သဒ္ဒါ၊ ဝေါဟာရစကားလုံးနှင့် အသံထွက်ပုံစံတို့သည် စံပြုစဖွယ် အခြေခိုင်လာပြီး ရုရှားတစ်ပြည်လုံးအနှံ့တွင် ရုရှားစာပေအရေးအသားသည် ကြီးပွားတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ၂၀ရာစုမတိုင်မီအထိ မျိုးရိုးမြင့်သောအဆင့်အတန်းမှ ဆင်းသက်လာသူများနှင့် မြို့နေလူတန်းစားများသာ စံရုရှားစကားပြောပုံစံကို ပြောဆိုကြပြီး ကျေးလက်ဒေသများတွင်နေထိုင်သည့် ရုရှားရွာသားတို့သည် သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင် ဒေသိယဘာသာစကားများကို ဆက်လက်ပြောဆိုလျက်ရှိခဲ့ကြသည်။ ၂၀ရာစုအလယ်ခန့်တွင် ထိုဒေသိယဘာသာစကားများသည် ဆိုဗီယက် အစိုးရမှ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည့် ပညာရေးစနစ်နှင့် ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြားစသော ပြန်ကြားဆယ်သွယ်ရေးနည်းများကြောင့် နောက်ဆုံးတွင် ပျောက်ကွယ်ခဲ့ရသည်။
Russian Language EnjoyingaBoost in Post-Soviet States။ Gallup.com (August 1, 2008)။ 2010-05-16 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Арефьев, Александр (2006). "Падение статуса русского языка на постсоветском пространстве" (in Russian). Демоскоп Weekly (251).
The World's Most Widely Spoken Languages။ Saint Ignatius High School။ 27 September 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 February 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Encyclopaedia Britannica 1911။
Демографические изменения - не на пользу русскому языку။ Demoscope.ru။ 2014-04-23 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Diagram။ Pub.stat.ee။ 2013-06-18 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Population census of Estonia 2000. Population by mother tongue, command of foreign languages and citizenship။ Statistics Estonia။ 2007-10-23 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Kazakhstan's News Bulletin, April 20, 2007"၊ April 20, 2007။ May 16, 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Population by other languages, which they know, by county and municipality။ Statistics Lithuania။ 17 January 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2009-05-16 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Population by mother tongue and more widespread language skills in 2000။ Statistics Latvia။ 23 May 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2009-05-16 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။